စိတ်ကြွဆေး၊ လိင်စိတ်စွဲနေသူ ... နို ၀ င်ဘာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သောစကရင်ပီယိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်clichésများကိုယုံကြည်သင့်သလား။
စိတ်ကြွဆေးများ၊ မကျေနပ်မှုများ၊ လိင်စွဲချက်တင်မှုများ ... နိုဝင်ဘာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သောစကရင်ပီယိုသည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်မှာclichésများကိုယုံကြည်သင့်သလား။
နက္ခတ်ဗေဒင်နိမိတ်လက္ခဏာများအားလုံးကဲ့သို့ပင် Scorpio သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်clichésခံစားနေရသည်။ ဒါပေမဲ့ငါတို့တကယ်သူတို့ကိုယုံကြည်ဖို့လိုသလား။ နိုဝင်ဘာလ၏နိမိတ်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
အကယ်၍ နက္ခတ်ဗေဒင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားချိန်တွင်ဂြိုလ်များသည်မရှိမဖြစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ ကောင်းကင်၌သူတို့၏အနေအထားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်အတိအကျသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒါကိုမွေးရာပါဇယားလို့ခေါ်တယ်။ လူအများစုကသူတို့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာနဲ့သူတို့ရဲ့တက်ကြွမှုကိုသာသိကြပေမဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟာနိမိတ်လက္ခဏာအားလုံးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါတယ် ရာသီခွင်. ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုမူပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်တိုင်သင်၏နေရောင်နိမိတ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုရန်ခက်ခဲသည်။။ နက္ခတ်ဗေဒင်ဖြင့်သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုသင်ရှာနိုင်ပါကကင်းမြီးကောက်၏လက္ခဏာကိုအာရုံစိုက်ကြပါစို့။ မကြာခဏဝေဖန်ခံရခြင်းနှင့်လွဲမှားစွာစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း, ဒီရေနိမိတ်လက္ခဏာကိုသို့သော်ရှုပ်ထွေးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်!
အကယ်၍ သင်သည်အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှနိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အကြားမွေးဖွားလာပါကသင်သည်ကင်းမြီးကောက်၏အမှတ်အသားအောက်တွင်မွေးဖွားလာသည်။ ပြီးတော့ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လိမ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး၊ ကြားချင်တာ၊ လူတွေမှားနိုင်တယ် ကင်းမြီးကောက်သည်ကင်းမြီးကောက်၏နာမည်ကောင်းတွင်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်းအမြဲပြောခဲ့သည်။ သူသည်မကျေနပ်ချက်၊ ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှု၊ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်အားဖြင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်။။ သဘာဝအားဖြင့်ကင်းမြီးကောက်သည်အလွန်ပြင်းထန်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒါကသူပဲဟုတ်လား ခံစားချက်များကို သို့မဟုတ်သူ၏အောင်မြင်မှုများကိုသူ ၁၀၀၀% ခံစားရမည်။ သို့သော်ဤပြင်းထန်မှုကိုလည်းသူ၏အတွေးများတွင်ထင်ဟပ်နေသည်။ သူဟာအကြောင်းအရာချင်းတူတူပဲ၊ နာရီပေါင်းများစွာစဉ်းစားပြီးပြproblemsနာတွေအတူတူပဲ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသူတို့ထဲကတစ်ခုခုရဖို့သေချာစွာခွဲထုတ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
အမှန်စင်စစ်ကင်းမြီးကောက်သည်မျှော်လင့်ခြင်း၏မာစတာဖြစ်ပြီးသူသည်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးနှင့်ဝှက်ထားရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တိုင်သူ၏စိတ်ခံစားမှုသည်အလွန်အားကြီးသည်။ အမှန်မှာ၊ ဤရေနိမိတ်သည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပြီးသစ္စာဖောက်ခံရမည့်အရာထက် ပို၍ ကြောက်သည်။ အကယ်၍ သူသာဖြစ်ခဲ့ရင်လက်စားချေလိုတဲ့ဆန္ဒဟာမတူကွဲပြားပါလိမ့်မယ်၊ သို့သော်သူသည်ထူးခြားသောစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏ပင်ကိုယ်သိစိတ်သည်အပြင်ဘက်၌ရှိသည် မြို့ အတိုင်းအတာ။ သူ့ထံမှမည်သည့်အရာကိုမျှဖုံးကွယ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ အကြောင်းမှာသူကိုယ်တိုင်သူလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်အလွန်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင့်အားသူနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုသူ့အားဖွင့်ဟရန်သင့်အားတွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ သူဟာဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူး၊ သူ့ကိုသူ့ကိုအလယ်အလတ်ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်။ ကင်းမြီးကောက်အဘို့, တစ်ဝက်အစီအမံရှိပါတယ်။ အရာဝတ္ထုတွေကအနက်ရောင် (သို့) အဖြူရောင်တွေပါ။
ဟုတ်တယ်ကြည့်ရအောင်။ ကင်းမြီးကောက်အတွက်လိင်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူသည်ဖြားယောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ သူ၏ကျက်သရေနှင့်သူ့ဝန်းကျင်ရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကြောင့်သူသည်အခြားမည်သူမျှမကစားရခြင်းကိုသိပြီးမကြာခဏနှစ်သက်သည်။ သူသည်သူ၏မိတ်ဖက်များကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ထက် ကျော်လွန်၍ ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ခြယ်လှယ်ခြယ်လှယ်နေသည့်အနေနှင့်သူ၏အခြေခံအားဖြင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လွယ်သောကြောင့်သူသည်အခြားတစ်ချက်ကိုနားလည်ရန်၊ အဘယ်သို့ပြောရမည်၊ အခြေအနေတစ်ခုစီတွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိရန်စွမ်းရည်မှအားလုံးအထက်တွင်ရှိသည်။ သူသည်တစ်ခါတစ်ရံသင့်အတွက်ခက်ခဲသည်ဟုထင်ရလျှင်၎င်းသည်သူ၏ခွန်အားလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသောမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် ကင်းမြီးကောက် တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သူဘာပဲဖြစ်နေပါစေသူသည်အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားရန်၊ ပြန်ခုန်ထွက်ရန်နှင့်သူ့ခြေထောက်ပေါ်ရပ်ရန်အမြဲတမ်းစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။
ထိုထက် ပို၍ မကြာခဏဆိုသလိုကင်းမြီးကောက်သည်သူတို့၏ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကိုကောင်းမှုပြုရန်နှင့်သူတို့အနီးကပ်ရှိသူများကိုသူတို့နာကျင်ကိုက်ခဲရာနှင့်ထိတွေ့ပုံကိုသိသော်လည်းကူညီရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သစ္စာရှိမိတ်ဆွေတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်မည်သည့်အခါကမျှမပူးပေါင်းလိုတော့ဟုသင်ခံစားရသောအခါသင်၏အရေးအကြီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည်ငြူစူခြင်းရှိသော်လည်းသူသည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အဓိကအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်းမြီးကောက်ကခင်ဗျားကိုမာနကြီးပြီးချမ်းအေးတယ်လို့ခံစားရစေနိုင်တဲ့အပြင်၊ အတွင်းပိုင်းကနေလေပူလာလိမ့်မယ်။ သို့သော်သူ၏ယုံကြည်မှုကိုသင်ရရှိပါကသူသည်သင့်အားအရာရာအားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုမနာလိုမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများမဖြစ်စေရန်တားဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောသမျှကိုသူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေလို့ပဲ။ သူသည်သင့်ကိုအစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်၊ အကယ်၍ သင်ပိုမိုသိလိုပါကသင်၏ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးသင်၏ကျောင်းပြန်သွားသည့် Astro ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင့်အတွက်သိုလှောင်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်။
DJ ARAFAT သေဆုံးမှု၏ဤနက်နဲသောအရာသည်ဤဗီဒီယိုတွင်သင့်အားအမှန်တကယ်အံ့အားသင့်စေလိမ့်မည် - ဗီဒီယို
မင်္ဂလာရှိသောကုလသမဂ္ဂနေ့! Celina သံတမန်များကို Angelina Jolie၊ Orlando Bloom နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ - ဗီဒီယို
သမ္မတအားအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသောလူငယ်ဆန္ဒပြသူများ လွန်ခဲ့သော2ပတ်က